MANANARA-AVARATRA : Nirehitra vokatry ny fahanterana ny milin’ny Jirama, miakatra ny feo
May kila forehitra ny foiben-toeram-pamokarana herinaratry ny Jirama ao Mananara-Avaratra ny sabotsy 2 jona tokony ho tamin’ny 4 ora maraina teo. Araka ny angom-baovao, dia vokatry ny fahanteran’ny milina ny firehetana. 5 juin 2018
Milina telo amin’ny milina fito misy ao amin’ny Jirama Mananara-Avaratra ireto may ireto. Vokany, misedra olana tanteraka ny mponina any an-toerana. Taorian’io fahamaizana io, dia ferana ho ora roa monja isan’andro isaky ny fokontany ny fandehanan’ny jiro. Tsy maharaka ny filan’ny mpanjifa ireo milina sisa tavela. Manomboka miakatra ny feo ao Mananara-Avaratra : maninona ny fanjakana no tsy manome milina ngeza afaka mamokatra herinaratra ampy ho an’ny mponin’i Mananara-Avaratra ?
Milina madinika natambatambatra mantsy hatramin’izay no mampandeha ny Jirama any amin’io distrika any amin’ny tapany avaratry ny faritra Analanjirofo io. Ny vahoakan’i Mananara-Avaratra rahateo izay efa malaza amin’ny fanaovana rotaka rehefa misy trangan-javatra tsy mifanaraka amin’ny sainy. Raha tsy mahita vahaolana ao anatin’ny fotoana fohy ny mpitantana ny Jirama, dia ahiana ny hisiana fikomiana mahery vaika ao Mananara-Avaratra manoloana io fahasahiranana amin’ny herinaratra ao an-toerana io.
Raha tsiahivina, dia efa nanao hetsika mahery vaika nanoherana ny delestazy ny vahoakan’i Mananara-Avaratra ny volana mey 2013 izay nandrotehan’izy ireo ny biraon’ny polisy tany an-toerana.